Anti-scratch Fiompiana ranom-boasary China Manufacturer
Description:Fanangonam-bokatra vita amin'ny ranomandry,Anti-scratch Car Spray,Volon'ondry miloko manitra
Home > Products > Olana fikarakarana fiara > Crystal Wax Plating > Anti-scratch Fiompiana ranom-boasary
Model No.: TUWF-148
Toetran'i Crystal Wax:
Mibanjina tsara, malemy, manohitra ny tain-drendrika ary manenjika.
Ity vokatra ity dia ampiasaina amin'ny fikojakojana ny lamosina, ny loko avo, ny harefo, ny tavy sy ny anti-scratch, ny ranon-drongony, ny ranonorana amin'ny asidra ary ny asa hafa, Mivezivezy hatrany ny hamaratra toy ny vaovao.
Ny vokatra dia polymère, porofom-pihariana kaparary sy ravina kely eo anelanelan'ny loko, famolavolan'ny Superhydrophobic eo amin'ny loko,
Fotoana nanolo lava maharitra maharitra ela.
Atsangano miadana alohan'ny fampiasana azy, ary asio fery eo amin'ny loko
(Manomàna soso-kevitra fanorenana, manaparitaka eny an-tampony), ary andramo miaraka amin'ny lamba fanasana madio sy maina mandra-pahavitan'ny loko ary tsy misy tsiranoka, vita ny fanorenana.
1. Mialà amin'ny ankizy.
4.Aoka avy hatrany ny fanindroany, tokony hosorana izy mandra-piraiketan'ny loko.
Orinasa mavitrika: Polysilicon, Fluorosilane, rano
Anti-stain and anti-scratch Car Crystal Wax Plating Contact Now
Fotoana lava lava maharitra ela indrindra Crystal Wax Plating Contact Now
Car Wax Plating Crystal Glossy Covering Contact Now
120ml Anti-scratch Car Paint Crystal Plating Wax Contact Now
Fanangonam-bokatra vita amin'ny ranomandry Anti-scratch Car Spray Volon'ondry miloko manitra Fiara vita amin'ny vera quartz Manadio fiara vita amin'ny hoditra Mangatsiaka rano amin'ny rano Ny vokatra vita amin'ny sary hosodoko Manamboatra fiara hipetraka amin'ny hoditra manodidina ahy